Elon Musk na-ekwu maka Apple Car | Esi m mac
Elon Musk na-ekwu maka Apple Car
Mmasị nke ndị na-emepụta ụgbọ ala n'inwe ike ịnye ụgbọ eletrik ebulitela mmasị nke ọtụtụ ụlọ ọrụ gụnyere Apple, nke dịka leaked ọnwa ole na ole gara aga, na-arụ ọrụ na Project Titan iji wuo ụgbọ eletrik. N'uche m, ọ dị ntakịrị oge, ebe ọ bụ na ọtụtụ afọ, ndị nrụpụta buru ibu na-enyocha teknụzụ a ọtụtụ afọ.
Ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ụgbọ ala eletrik anyị ga-ekwu maka onye na-arụpụta ụgbọ ala eletrik Tesla, nke ruo ọtụtụ afọ, enyela ya ụdị ahịa dị iche iche n'ahịa ọtụtụ afọ na-emeziwanye kwa afọ na nnwere onwe na ọrụ ọhụrụ dịka ịkwọ ụgbọala kwụ ọtọ agbakwunyere ihe karịrị otu ọnwa gara aga.
Onye guzobere na onye na-enyere ndị mmadụ aka bụ Elon Musk, onye guzobere Tesla, Space X na PayPal n'etiti ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ka nyeworo BBC mkparịta ụka nke Nkwupụta Apple Car bụ ihe nzuzo na-emeghe ma n'ime ma n'èzí ahịa akpaaka. Ọ makwaara nke ọma na Apple na-ekenye ọtụtụ akụ na Project Titan, ebe ọ bụ na ọnwa ndị na-adịbeghị anya ọ goro ihe karịrị ndị injinia 1000, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị a chụrụ n'ọrụ mbụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ maka Musk na Tesla.
Musk achọghị ịma banyere asọmpi ọdịnihu Apple nwere ike iburu maka ụlọ ọrụ ya, ebe ọ bụ na nkà ihe ọmụma Musk na-enwe ike ịnye ike dị ọcha nye ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu nke ndị bi na ya dị ka ihe akaebe nke a, izu ole na ole gara aga, o kwuru na n'ime afọ ole na ole, ọ na-ezube ịmalite ụdị Tesla. n'ahịa nwere obodo kwụụrụ onwe ya nke dị nso na kilomita 1000 na ọnụahịa dị nso $ 30.000. Ugbu a enwere ike ịchọta ụdị azụmaahịa kachasị nke ụlọ ọrụ maka euro 70.000, yabụ ọnụọgụ ndị ahịa nwere ike ịbelata na mpaghara nwere ikike ịzụta ihe dị ukwuu.
Ihe doro anya bụ na ọ bụrụ na anyị eburu n'uche nkà ihe ọmụma nke Apple, ụdị a na-ere na Titan Project ugbu a, nke a ga-ewepụta na 2019, agaghị elekwasị anya na ọha mmadụ, mana kama, ọ ga-elekwasị anya na ahịa nwere oke ike ịzụrụ ihe. Tụkwasị na nke ahụ, ma Tesla na ndị ọzọ na-emepụta ihe ndị na-agbazi ugbu a na ụgbọ ala eletrik dị ọtụtụ afọ n'ihu ụlọ ọrụ Cupertino.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Elon Musk na-ekwu maka Apple Car
gịnị mere i ji sị na ọ abịaghị n'oge? Kedu ihe kpatara ị jiri kwuo na ndị ọzọ dị afọ ole na ole? Kedu ihe ị maara ihe Apple na-eme? Apple ọ nwere ama ma ọ bụ nwee ekwentị mkpanaaka maka ya tupu 2007? Mana enwere ndị nrụpụta dịka Nokia, Samsung, wdg ndị nwere ọtụtụ afọ "n'ihu" mgbe ahụ Apple pụta wee tie ha niile ihe.
Teslọ ọrụ Tesla nke na-arụpụta ụgbọala eletriki na ngwaọrụ maka ịchekwa ọkụ eletrik, tọrọ ntọala na 2003, ogologo oge tupu Apple echee ịmalite iPhone mbụ. Na mgbakwunye, kpomkwem Elon Musk, CEO nke Tesla, wepụtara obere ihe karịrị otu afọ gara aga, ikike nchọpụta o nwere nke ya ka ndị nrụpụta ndị ọzọ nwee ike iji ha na ụdị eletrik ha, iji nwekwuo ikike ha. Ugbu a, ụdị Tesla nwere nkezi nke 500/600 kilomita, mana n'ụdị ụfọdụ, ha nwere ike iru ruo kilomita 800 na dịka m kwuru na afọ ole na ole, ha ga-enwe ike ịfe 1000 kilomita.
Ọ bụrụ na ị na-eche na-asị na Apple bụ mbubreyo ke mbuba maka imewe nke electric ụgbọala na-adịghị dabere na ọ bụla ebumnobi data, M na-eme ihe n'eziokwu adịghị aghọta gị. Anyị na-ekwukwa banyere ugbo ala, ọ bụghị ngwaọrụ eletrọniki, ebe Apple nwere ahụmịhe nke mmadụ niile maara nke ọma.
Egbe, ọhụrụ atụmatụ egwuregwu na Mac App Store